သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား သရ၀ဏ်(ပြည်) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်တက်လာမည်. အစိုးရအတွက် စိမ်ခေါ်မှုများစွာ ၊ အခက်အခဲများစွာကစောင်.ကြိုနေသည် ။ ထိုအခက်အခဲများထဲမှတခုမှာ အစိုးရယန္တယားအတွင်း ယခင်အစိုးရမှ ထည်.သွင်.မြှုပ်နှံသွားသည်. ပဉ္စမံတပ်သားများဖြစ်သည် ။ ထိုပဉ္စမံတပ်သားများသည် အသွင်အမျိုးမျိုးဖြင်. နေရာယူထားပြီးဖြစ်သည် ။ အစိုးရအဖွဲ.အတွင်း ပထမဆုံး ခြေကုပ်ယူသွားပြီးသော ရာထူးနေရာများမှာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ခုနစ်လခန်.ကမှအချိန်ကိုက်ခန်.အပ်ခဲ.သည် အမြဲတန်းအတွင်းဝန် ( Permanent Secretary ) ဟူသောရာထူးဖြစ်သည် ။ ထိုရာထူးသည် ဒုဝန်ကြီး၏အောက်တစ်ဆင်. ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏အထက် ဖြစ်သည် ။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ရာထူးမှာ တစ်လလျှင် ကျပ်ငါးသိန်းရပြီး ၊ အမြဲတန်းအတွင်းဝန်၏လစာမှာတလလျှင်ကျပ်ခုနစ်သိန်းဖြစ်သည် ။ ထိုအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးသည် အင်္ဂလိပ်ခေတ် နှင်. ဦးနု၏ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်တွင်ပါ ကျင်.သုံးခဲ.သောရာထူးဖြစ်ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်းဦးဆောင်၍ တပ်မတော်မှအာဏာသိမ်းအပြီးတွင် ဖျက်သိမ်းခဲ.သောရာထူးဖြစ်သည် ။
အမြဲတန်းအတွင်းဝန်ရာထူး၏ သဘောတရားမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် ၀န်ကြီးများသည် ငါးနှစ်တခါ အနိုင်ရပါတီမှခန်.အပ်သဖြင်.တက်လာလိုက်ဆင်းသွားလိုက်ဖြစ်နေရာတွင် ၀န်ကြီးဌာနကို ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်နိုင်မည်. လူဟောင်းတဦး ရာထူးတွင် အမြဲရှိနေပါက အရှိန်အဟုတ်မပျက်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၊ မပြီးပြတ်သေးသော စီမံကိန်းများကိုပေါ်လစီပိုင်းအရဆက်လက် ကိုင်တွယ်သွားနိုင် ၊ စီမံခန်.ခွဲမှုခါးဆက်ပြတ်မသွားရန်ဖြစ်၍ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်မှာကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုရပေမည် ။
သို.သော်မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးကိုခန်.သောအခါ မကောင်းကွက်နှစ်ခုရှိနေသည် ဟုထင်မြင်မိသည် ။ ပထမအချက်မှာ လူကိစ္စဖြစ်သည် ။ အင်္ဂလိပအစိုးရလက်ထက်နှင်. ဦးနုအစိုးရလက်ထက်များတွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးကို အများအားဖြင်. အရပ်သားထဲမှကျွမ်ကျင်ပညာရှင်များသာခန်.အပ်ခံရလေ.ရှိသည် ။ အိုင်စီအက်(စ်)ဘွဲ.ရစသော အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူများ ၊ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် အတော်ဆုံးသောပညာရှင်များကိုသာ မျက်နှာမလိုက်ပဲ လူမှန်နေရာမှန်ခန်.ထားခဲ.ကြသည် ။ထို.အပြင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရနှင်.ဦးနုအစိုး၇လက်ထက်ကယခုလိုဝန်ကြီးဌာန်များ လိုသည်ထက်ပို၍ မဖောင်းပွသေးပေ။ ဒုဝန်ကြီးဆိုသူများလည်းယခုခေတ်လိုတဌာနတွင်နှစ်ယောက်နှုန်းမရှိပေ ။ ယခုအခါ ၀န်ကြီး ၊ဒုဝန်ကြီးနှစ်ဦး ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၊ ဒုညွှန်ချုပ် ၊ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၊ဦးစီးမှူး ၊ဒုဦးစီး စသည်ဖြင်. ကိစ္စတခုပြီးဖို. တသီတတန်းကြီး စားပွဲများစွာကိုကြိုးနီစနစ်ဖြင်.ဖြတ်သန်းရပေဦးမည် ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် အရာရှိပိုင်းသည် တပ်မတော်မှပြောင်းရွှေ.လာသူတွေသာများခဲ.သည် ။ ညွှန်ချုပ်၊ ဒုညွှန်ချုပ် ဆိုသောရာထူးကို တပ်မှပြောင်းရွှေ.လာသော မိုးကျရွေကိုယ်များကိုသာ ပေးအပ်ခန်.ထားခဲ.တာများသည် ။ ထိုသူများသည် လုပ်ငန်းပိုင်းနှင်.ပါတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပါယ်တွင် အတော်ဆုံးလူများဟု သေချာပေါက်မပြောနိုင်သော သူများသာများပါသည် ။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးများပေါ်ပေါက်လာသောအခါ မည်သူတွေကိုရာထူးခန်.ထားခဲ.ပါသနည်း ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင်လက်ရှိ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များကိုသာ ရာထူးတဆင်.တိုးကာ အမြဲတန်းအတွင်းဝန်ဟူ၍ခန်.ထားခဲ.ခြင်းဖြစ်ရာ ထိုသူများသည် တပ်မှလာသော သူများ ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီနှင်. အလွန်နီးစပ်သူများသာဖြစ်သည် ။ သေချာသည်က NLD ပါတီကိုထောက်ခံသောမည်သည်. ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မျှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးကိုမဆိုထားနှင်. လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးကိုပင် ရခဲ.ခြင်းမရှိခဲ.ချေ ။ သေချာသည်ကတော.အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အားလုံးသည် တပ်မတော်သားဟောင်းများ (သို.မဟုတ် ) ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီနှင်.နီးစပ်သူများဖြစ်သည် ။ ရာထူးခန်.ထားရာတွင် လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်မှုထက် ရှိပြီးသားလူများကို တဆင်.တိုး ရာထူးပေးလိုက်ခြင်းကများသည် ။ တပ်မတော်မှလာသောသူများသည် ။ ဤသည်က ထောက်ပြစရာအကြောင်းတချက်ဖြစ်သည် ။
ဒုတိယ ထောက်ပြလိုသော အချက်မှာ ရာထူးခန်.အပ်လိုက်သောအချိန်ဖြစ်သည် ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအုပ်စိုးခဲ.သော တောင်လှန်ရေးကောင်စီနှင်.မ.ဆ.လ.ပါတီ ၂၆ နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာလည်း အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးကိုအသက်မသွင်းခဲ. ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်နှင်. ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွေ အုပ်ချုပ်ခဲ.သော န.၀.တ ၊ န.အ.ဖ သက်တမ်း (၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၀ ) အတွင်းမှာလဲ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဟူ၍ ၀န်ကြီးဌာနများမှာမရှိခဲ. ။ အရပ်သားအစိုးရဟုကြွေးကြော်ကာတကလာသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ပထမလေးနှစ်သက်တမ်း (၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ) တွင်လည်း အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဟူ၍မရှိခဲ. ။ ၂၀၁၅ သို.ရောက်လာပြီး နိုဝင်ဘာလတွင်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပတော.မည်ဟုသေချာသွားသောအခါ ၊ NLD ပါတီနှင်.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို. လူထုထောက်ခံမှုအားကောင်းနေသောအခါ ၊ လွှတ်တော်တွင်အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) ကျင်.သုံးခြင်းမပြုရန် လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်သောအချိန် ၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ခုနစ်လမျှပဲ ကျန်တော.သည်.အချိန်တွင်မှ ရုတ်တရက်ကောက်ကာငင်ကာ အမြဲတန်းအတွင်းဝန်ရာထူးခန်.ထားဖို.စီစဉ်လာခြင်းသည် တိုက်ဆိုင်မှုတော.မဟုတ်ပေ ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကကျင်.သုံးခဲ.သောစနစ်တခုကို (၅၃)နှစ်လုံးလုံးမေ.လျော.နေပြီး ယခုမှကောက်ကာငင်ကာသတိရလာခြင်းမှာသွေးရိုးသားရိုးဟုတ်မဟုတ်သံသယဖြစ်လာလျှင်ဖြစ်သူမှာ မလွန်ဟုပြောရပေမည် ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာလာခြင်း ထိုစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ.လျှင် ယုတ္တိရှိသေး၏ ။ အစိုးရသက်တမ်းကုန်ကာနီးမှ ထိုရာထူးနေရာတီထွင်ဖို.အကြံရလာခြင်းကား အံ.ဖွယ်သရဲရှိလှ၏ ။ ထို.ကြောင်.ဤကိစ္စသည် မီးဇာကုန်ဆီခမ်းတော.မည်. အစိုးရအဖွဲ.တဖွဲ.အနေနှင်.မိမိဘက်တော်သားများကို ၀န်ကြီးဌာနအားလုံး၏အရေးပါသော ၀န်ထမ်းအကြီးဆုံးရာထူးများတွင် အတွင်းလူအဖြစ် ထည်.သွင်းနေရာချထားခြင်းလားဟုတွေးတောမိပါသည်။
ကျွန်တော်ကဲ.သို.တွေးတောမိသူမှာ NLD ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးဖြစ်ဟန်ရှိသည် ။ အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးများ တီထွင်ခန်.အပ်ရန် အစိုးရကလွှတ်တော်တွင်တင်သွင်းအတည်ပြုချက်ယူစဉ်က ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးသည် အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းကာ ထိုရာထူးခန်.ထားမှုစနစ်ကို ကန်.ကွက်ခဲ.သောကြောင်.ဖြစ်သည် ။ ၂၀၁၅ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ.က လွှတ်တော်တွင် အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းရာ၌ “ဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးခန်.ထားရေးအဆိုကိုကန်.ကွက်ရတဲ.အကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ် ၊ ပထမအချက်ပြောချင်တာကာ ဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဆိုတဲ.ရာထူးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတိုင်မီမှာမခန်.အပ်ဖို. ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ် ၊ ဒုတိယအကြောင်းကတော. အဲဒိရာထူးတွေကိုချီးမြှင်.မယ်. လစာငွေစနစ်ဟာတည်ဆဲ ပြည်သူ.၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်း တွေ နဲ.မညီညွတ်ပါဘူး “ ဟုထောက်ပြကန်.ကွက်ခဲ.သည် ။ အမြဲတန်းအတွင်းဝန် ( PS ) ရာထူးပိုင်ရှင်သည် တလလျှင်လစာငွေကျပ်ခုနစ်သိန်းရရှိမည်ဖြစ်သည် ။ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက “ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးခန်.ထားမှုကြောင်.ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပိုများလာပြီး ဗျူရိုကရေစီယန္တယားမှာကြိုးနီစနစ်ပိုပြီးထွန်းကားလာမှာမို. အပြင်းအထန်ကန်.ကွက်ပါတယ် “ ဟုပြောကြားခဲ.သည် ။သို.သော်လည်းကြံ.ခိုင်ရေးအမတ်အများစုဖြစ်နေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကထိုအဆိုကိုအတည်ပြုခဲ.ပါသည် ။ယခုအခါ မြန်မာအစိုးရ၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် အမြဲတန်းအတွင်းဝန်ဆိုသောရာထူးများ တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည် ။ထိုသူများသည် အမြဲတန်းအတွင်းဝန်ရာထူးကိုမရရှိမီနေပြည်တော်တွင် ရက်သတ္တခြောက်ပါတ်ခန်.သင်တန်းတက်ခဲ.ရသည်ဆို၏ ။ တလခွဲခန်.အမြန်သင်တန်းနှင်.ခန်.ခဲ.သော ရာထူးဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်. NLD မှတက်လာသောအစိုးရအဖွဲ.သည် ၀န်ကြီးနှင်.ဒုဝန်ကြီးအသစ်များကိုခန်.အပ်လိုက်သော်လည်း ယခင်အစိုးရချန်ထားခဲ.သော အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များက ရှိမြဲနိုင်ငံ.၀န်ထမ်းများ၏ရာထူး အကြီးဆုံးသောခေါင်းဆောင်များအဖြစ် ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည် ။ဤကား ပထမပဉ္စမံတပ်သားပေတည်း ။
ဒုတိယအတွင်းလူများကားရှိသေးသည် ။ထိုလူများကား ပြည်နယ်အစိုးရ နှင်.တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ. အတွင်းရေးမှူးမှာ သမ္မတအသစ်ကခန်.အပ်ခွင်.ရမည်မဟုတ် ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၀ အရ တိုင်းဒေသကြီး (သို.မဟုတ်)ပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအကြီးအမှူးသည် ရာထူးအလျောက် သက်တိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး (သို.မဟုတ်)ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ.၏အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည် ဟုဖော်ပြထား၏ ။ ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်း အစိုးရ ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ.၏ အသည်းနှလုံးသဖွယ်ဖြစ်သော အစိုးရအဖွဲ.အတွင်းရေးမှူးသည် ရွေးကောက်ခံလည်းမဟုတ် ၊ သမ္မတကခန်.အပ်သူလည်းမဟုတ်ပဲ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန်.အပ်သော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလက်အောက်ခံ တပ်မတော်သားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။ ပြည်နယ်နှင်.တိုင်း ၁၄ ခု၏အစိုးရအဖွဲ. ၁၄ ခုတွင် တပ်မတော်မှလာသော လူ၁၄ ယောက်သည် အစိုးရအဖွဲ. အတွင်းရေးမှူးနေရာတွင် အလိုလျောက်ပါဝင်ခွင်.ရနေမည်ဖြစ်သည် ။ထိုသူ ၁၄ ယောက်သည် NLD တင်မြှောက်သောသမ္မတကရွေးချယ်ခန်.ထားသည် ၀န်ကြီးချုပ်နှင်.လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သဖြင်. ပြည်နယ်နှင်.တိုင်း အစိုးရများ၏အတွင်းရေးသည် ထိုသူများမှတဆင်.တပ်မတော်သို. အမြဲတမ်းပေါက်ကြားနေမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုသူ (၁၄ )ဦးသည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲမှတက်လာသော အစိုးရထက် သူ၏မိခင်တပ်ရင်းဖြစ်သော တပ်မတော်ကိုသာပို၍ သစ္စာခံပေလိမ်.မည် ။ ပြည်နယ်နှင်.တိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်၏အမိန်.အာဏာထက်သူ၏တိုက်ရိုက် အလုပ်ရှင် Boss ဖြစ်သော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ကိုသာပို၍ အားကိုးမည်ဖြစ်သည် ။အဘယ်ကြောင်.ဆိုသော် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလက်အောက်တွင်ရှိပြီး ၊ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမှာ တပ်မတော်မှလာသော ဗိုလ်ချုပ်များသာဖြစ်ခွင်.ရှိသောကြောင်.ဖြစ်သည် ။
ဤသည်ကား အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားတွင် ရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ဘက်မှလူများဖြစ်သည် ။ တရားစီရင်ရေးသည်လည်း မြှုပ်ကွက်များရှိနေပါသည် ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ကိုခန်.ရမည် ။သို.သော်သမ္မတသစ်တယောက်တက်တိုင်းပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်အသစ်တယောက်ကခန်.ခွင်.ရှိသည်တော.မဟုတ် ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခန်.ခဲ.သောပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် အသက် ၇၀ မပြည်.မချင်း ရာထူးမှာမြဲနေမည်ဟုဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၃ တွင်ပါရှိပေ၏ ။ ထိုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်မှာလည်း ဤရာထူးတွင် ဦးသိန်းစိန်ကခန်.အပ်ချိန်တွင် တပ်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းတောင်နေသောဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်သည် ။ အရပ်သားဥပဒေပညာရှင်များစွာရှိသည်.အနက် တပ်မတော်မှဥပဒေပညာရှင်တယောက်ကို ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ရာထူးတွင်ခန်.အပ်လိုက်ပြီး ထိုရာထူးသည် အသက် ၅၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော လက်ရှိတရားသူကြီးချုပ် အသက် ၇၀ အထိ (သက္ကရာဇ် ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ) ဆက်လက်သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဖွဲ.စည်းပုံတွင်ပြဌာန်းထားခြင်းသည်လည်းတိုက်ဆိုင်မှုဟုတ်ဟန်မတူပေ ။တရားစီရင်ရေးတွင် အကြီးဆုံးရာထူးဖြစ်သော တရားသူကြီးချုပ်အား တပ်မတော်မှသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မည်.သူကိုခန်.အပ်ထားခဲ.ခြင်းဖြင်. တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်သည် တပ်မတော်၏သြဇာအောက်သို. သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင်. သွတ်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်.တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်သည် ဘက်လိုက်မှုကင်းမကင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ဖြစ်လာပေသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများကို NLD ကအရေးယူမှု ၊ ယခင်အစိုးရအဖွဲ.၀င်ဟောင်းများကိုပြည်သူလူထုကတရားစွဲဆိုသောကိစ္စများပေါ်ပေါက်ခဲ.လျှင်တရားစီရင်ရေးသည် မည်သူ.ဘက်ကလိုက်မလဲဆိုတာ စေ.စေ.တွေးလျှင်ရေးရေးပေါ်ပါလိမ်.မည် ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအင်္ဂလိပ်တို.သည် စစ်ရှုံး၍ ဆုတ်ခွာရသောအခါ ကစဉ်.ကလျား အားလုံးထွက်ပြေးသည်မဟုတ် ။ ရှေ.မှဆုတ်သွားချိန်တွင်နောက်ချန်တပ်ဖွဲ.တဖွဲ.ကိုထားခဲ.ပြီး ဆုတ်ခွာသူများဘေးကင်းစေရန်နောက်မှလိုက်လာသူများကိုဟန်.တားသည်.နည်းဗျူဟာကိုသုံးခဲ.သည် ။ထိုဗျူဟာအရနောက်ချန်တပ်ဖွဲ.သည် ရန်သူများလိုက်မလာနိုင်စေရန် တံတားများကိုဗုံးခွဲဖျက်ဆီးခြင်း ၊ လောင်စာဆီကန်များကိုမီးရှို.ဖျက်ဆီးခြင်း ၊ ရန်သူ.သတင်းကို မိမိတပ်ဖွဲ.သို.အကြောင်းကြားခြင်းစသည်တို.ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ခဲ.ပေ၏ ။ထို.ကြောင်.ပင် စစ်ကိုင်းတံတား ၊စစ်တောင်းတံတားစသည်တို.ကို အင်္ဂလိပ်က ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးသွားခြင်းဖြစ်သည် ။ရေနံချောင်း၊ချောက်ရေနံမြေမှရေနံတွင်းများကို သုံးမရအောင် အင်္ဂတေများဖျော်လောင်းခြင်း ၊မီးရှို.ဖျက်ဆီးခြင်း ၊ ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှ သင်္ဘောများကိုနှစ်မြုပ်ပစ်ခြင်းတို.ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင်.နောက်မှလိုက်လာသူ များ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ကြ၏ ။ ရန်သူ.တပ်ဖွဲ.တွင်မိမိအတွင်းလူများထည်.ကာ ရန်သူ.သတင်းကိုမပြတ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေ၏ ။
ယခုအခါ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်၍တက်လာမည်.အစိုးရအဖွဲ.သည်လည်း ထိုနည်းဗျူဟာဆန်ဆန်ဖြစ်ရပ်မျိုးနှင်.ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိ၏ ။ ကာကွယ်ရေး ၊ပြည်ထဲရေး ၊ နယ်စပ်ရေးရာဟူသောလက်နက်ကိုင်ဝန်ကြီးဌာနသုံးခုကိုတပ်မတော်မှတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင်.ထိမ်းချုပ်လိုက်၏ ။ ကျန်ရှိနေသေးသော စီးပွားရေး ၊လူမှုရေး ၊နိုင်ငံရေးနှင်.သက်ဆိုင်သော ၀န်ကြီးဌာနများမှာမူ NLD မှစိတ်ကြိုက်ခန်.ထားသော ၀န်ကြီးများလက်အောက်သို.ကျရောက်ပေတော.မည် ။ထိုဒဏ်ကိုကာပြန်ရန်အတွက် မိုးကျရွေကိုယ်များကိုအရေးပါသောဌာနများတွင် ဦးစီးမှူး ၊ညွှန်မှူး ၊ လက်ထောက်ညွှန်ချုပ် ၊ညွှန်ချုပ်များအဖြစ်သွတ်သွင်းခန်.အပ်ပြီးရုံသာမက ထိုသူများအထက်တွင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဟူသော ရာထူးများကိုပါတီထွင်ခန်.ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည် ။ အစိုးရအဖွဲ.ထဲတွင်လည်း ပြည်နယ်နှင်.တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ.အတွင်းရေးမှူး ၁၄ ယောက် နေရာယူလိုက်ပြီဖြစ်သည် ။ အသစ်ရောက်လာသော အရပ်သားဝန်ကြီးများဘာတွေလုပ်နေသည် ၊ဘာတွေလုပ်တော.မည် ၊ဘာတွေကြံနေသည်ဆိုခြင်းကို ထိုလူများမှတဆင်.ပြည်ထောင်စုကြံ.ခိုင်ရေးနှင်.ဖွံ.ဖြိုးရေးပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင်.တပ်မတော်သည်အခါမလပ်သတင်းရနေတော.မည်ဖြစ်သည် ။ ထို.အပြင် အရပ်သားဝန်ကြီးအသစ်တက်လာသောကြောင်.အ၀င်ရအထွက်ရ ခက်သွားသော ယခင် ခရိုနီအဟောင်းများအတွက် အမြတမ်းအတွင်းဝန်များနှင်. အစိုးရအဖွဲ.အတွင်းရေးမှူးများသည် တံခါးဖွင်.ပေးမည်.လမ်းကြောင်းများ ၊၀င်ပေါက်ထွက်ပေါက်များဖြစ်လာတော.မည်ဖြစ်သည် ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင်.မယဉ်ပါးသေးသော ၀န်ကြီး ၊ဒုဝန်ကြီးအသစ်ကြပ်ကြွပ်များအတွက် ထိုလူဟောင်းကြီးများက အဂတိလိုက်စားနည်း ၊ခွင်ဖန်နည်း ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာနည်း အရေးယူမခံရအောင်ဥပဒေကိုလက်တလုံးခြားလုပ်နည်းများကိုနည်းပေးလမ်းပြလုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ထိုအခါ ငါးနှစ်သက်တမ်းပြည်.သောအခါ NLD ၀န်ကြီးများ၏အားနည်းချက် အပြစ်အနာအဆာများသည် ဆန်.ကျင်ဘက်ပါတီ နှင်.တပ်မတော်လက်ထဲတွင် ဖိုင်လ်တွဲပြီးသားအပြည်.အစုံဖြစ်ကာ သွားလေသူဝန်ကြီးဟောင်းများနှင်. NLD ၀န်ကြီးများလည်း ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲ အတူတူနှင်.အနူနူ ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာပေလိမ်.မည် ။
ထို.ကြောင်. NLD အစိုးရသစ်သည် အလွန်သတိထားသင်.လှ၏ ။ ပြည်နယ်နှင်.တိုင်းဒေသကြီးအစိုး၇အဖွဲ.အတွင်းရေးမှူးကို ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ခန်.ထားခြင်းဖြစ်၍ ငြင်းရခက်သည် ။ မလွဲမသွေလက်ခံရပေမည် ။ သို.သော် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ခန်.သောကိစ္စသည် ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေအရခန်.ခြင်းမဟုတ် ၊လွှတ်တော်ကအတည်ပြု၍ခန်.ခြင်းဖြစ်သဖြင်. ထိုစနစ်ကို NLD လွှမ်းမိုးသောလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်နိုင်ပါ၏ ။ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်အသက် (၇၀)အထိလုပ်ခွင်.ပြုထားသောသက်တမ်းပြဌာန်းချက်သည်လည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆန္ဒမဲတ၀က်ကျော်ဖြင်.ပြင်ဆင်၍ ရပေ၏ ။ အခြေအနေကိုကြည်.၍ အစိုးရအဖွဲ.အထိုင်ကျသွားပြီးတနှစ်ခန်.ကြာလျှင်ပြင်သင်.ကပြင်ရပါမည် ။
မပြင်နိုင်သေးမီစပ်ကြား အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြရသော် မိမိနှင်.အလုပ်အတူလုပ်နေသူများသည် ကိုယ်.ဘက်ပါချင်ယောင်ဆောင်နေသော သူ.ဘက်က လူများ ဖြစ်သည်. ကိုယ်.လူ သူ.ဘက်သားများဖြစ်သည်ကိုတော. NLD အစိုးရဖြစ်လာသောအခါကောင်းကောင်းသတိချပ်စေချင်ပါကြောင်း ။